पोलिसी अनुसार कार्यान्वयनमा जाने हो भने नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई कसैले छेक्न सक्दैन
सुरेन्द्रमान प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । वहाँले विगत २१ वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागमा रही काम गर्नुभएको थियो । यो अन्तर्वार्ता नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने…
मौद्रिक नीतिले सिसिडी रेसियोमा केही सहजता ल्याएको छ ।
यो अन्तर्वार्ता नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने बैंकिङ्ग प्रवर्द्धन कर्यक्रमबाट साभार गरिएको हो । राजेन्द्र प्रसाद पौडेल शाँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ बैंकिङ्ग प्रवर्द्धन कर्यक्रमका प्रतिनिधिद्वारा…
उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक-फरक छ ।
यो अन्तर्वार्ता नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने बैंकिङ्ग प्रवर्द्धन कर्यक्रमबाट साभार गरिएको हो । उपेन्द्र पौडेल एनएमबी बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । वहाँ विगत १७ वर्षदेखि एनएमबी बैंकमा सिइअोको…
हल्लै हल्लाले धेरै माथि गएको शेयर बजार अहिले करेक्सन भइराखेको छ ।
काठमाडौँ क्यापिटल मार्केट लिमिटेड कस्तो कम्पनी हो ? काठमाडौँ क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले धितोपत्र व्यवसाय र मर्चेन्ट बैंकिङ्ग सम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आएको छ । यो नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त पब्लिक…
साधन परिचालन नहुँदा आर्थिक विकास कमजोर
बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्थामा निकै उतार चढाव आइरहेको देखिन्छ । तपाईं निकै लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहनु भयो । तपाईंको विश्लेषणमा तरलताको यस्तो अवस्थाका कारण के हुन् ?…
बैंकिङ्ग विस्तारका प्रशस्त अवसर छन्
हालै तपाई नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । के छ भावि योजना? म नेपाल बैंकर्स संघको ३० आंै साधारणसभाबाट अध्यक्ष भएको छु । वित्तीय क्षेत्रमा कार्यक्रम सुरु…
विकास बैंक र वाणिज्य बैंकबीच वास्तविक प्रतिस्पर्धा छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको नाफामा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? सन्तुष्ट मान्नुपर्ने अवस्था नै छ । यसपालि पहिलो त्रैमासमा दशैं पर्न गयो । त्यसले गर्दा पनि असुली प्रक्रिया त्यति प्रभावकारी…
हाम्रो (विकास बैंक) र वाणिज्य बैंकको ब्याजदरमा धेरै फरक छैन ।
कैलाश विकास बैंक अहिलेको अवस्थामा कहाँ छ ? बैंक अग्रणी हुने विभिन्न आधारहरु हुन्छन्– पूँजी, निक्षेप संकलन, मुनाफा, शाखा संख्या । यी जति पनि वित्तीय सूचकहरू छन्, यी सबैमा एउटा…
गाउँ-गाउँमा वित्तीय पहुँच पुरयाउने काम जति महत्व छ ब्याजदर त्यति महत्व छैन ।
अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको स्थिति कस्तो रहेको छ ? अहिले सम्म राम्रो छ । हिजो हामीले बाह्र तेह्र जिल्लाहरुबाट शुरु गरेको सेवा अहिलेसम्म लघुवित्त बैंक वित्तीय संस्थाहरुले ७५ जिल्ला एक…
(भर्खरै चारवर्षका लागि नियुक्त हुनु भएका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसँग हाम्रा संवाददाताले लिएको अन्तर्वार्ता ।) लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी लिनु भएको छ अब तपाईका प्रथमिकताहरु…
पूँजी वृद्धिका लागि बैंकहरुलाई दिइएको समय पर्याप्त छैन ।
- दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री पूर्व गभर्नर - नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति आवश्यक भएर ल्याएको हो कि नियमन गर्न नसकेर ल्याएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई ? यो दुईवटै कुरा हो ।…
चुक्ता पूँजी बढ्नु भनेको बैंकको स्थ्रेन्थ बढ्नु हो ।
– ज्ञानुकृष्ण अधिकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक हरेक शनिवार नेपाल टेलिभिजनमा विहान ८ः३० बजे प्रसारण हुने बैंकिङ्ग प्रवर्द्धन कार्यक्रममा लिइएको अन्तर्वार्ता । सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि राम्रो सुधार भएर आएको…
बैंकको सिइओको कार्यकाल ४–४ वर्षको दुई कार्यकाल नै उपयुक्त हुन्छ ।
हिमालय शमसेर जबरा प्रथम गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक हिमालय शमसेर जबरा लेफ्टिनेन्ट लक्ष्मण शमसेर जबराका सुपुत्र हुनुहुन्छ । वहाँको जन्म सन् १९२८ जनवरी १० तारिखमा भएको हो । वहाँको शिक्षा एसएलसी–दरवार…
फाइनान्स कम्पनीहरूलाई पनि रिभाल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू प्रदान गर्न दिनु पर्छ ।
झपट बोहरा अध्यक्ष, सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेड हरेक शनिवार नेपाल टेलिभिजनमा विहान ८ः३० बजे प्रसारण हुने बैंकिङ्ग प्रवर्द्धन कार्यक्रममा लिइएको अन्तर्वार्ता । केही महिनाअघि मात्र सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडमा अध्यक्ष भएर आउनु भएको…
कुशलतापूर्वक संचालन गर्ने, लगानी गर्ने, न्यायोचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने र निक्षेपकर्ताहरुको हितको संरक्षण गर्ने, सिद्धान्त बुझेको व्यक्ति संचालक हुनुपर्छ ।
– लक्ष्मी प्रपन्न निरौला, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक एनसीसी बैंक व्यवस्थापन समिति संयोजक हरेक शनिवार नेपाल टेलिभिजनमा विहान ८ः३० बजे प्रसारण हुने बैंिकङ्ग प्रवर्द्धन कार्यक्रममा लिइएको अन्तर्वार्ता । श्री लक्ष्मी…
प्रत्येक तह र तप्काका मानिससँग हाम्रो बैंकिङ सम्बन्ध हुनु पर्छ ।
- कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिला प्रकाश सिटौला चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय अवस्थाबारे यहाँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? कृषि विकास बैंकको अहिलेसम्मको ओभरअल परफरमेन्स सन्तोषजनक छ…